ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော်တန် Cryptocurrency ခိုးယူမှုကြီးကြောင့် လစာမရဖြစ်နေရှာတဲ့ ဂျပန် Idol အဖွဲ့
On January 30, 2018 By Atsuko
ဘယ်လို ဘယ်လို ???
ဒီသတင်းကိုစမြင်သူတိုင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံးပေါ်လာတာကလည်း အဲဒီ “ဘယ်လို ဘယ်လို” ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ Cryptocurrency တွေ hack ခံလိုက်ရတာနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက Idol တွေလစာမရတာ ဘယ်လိုတွေများပတ်သက်နေတာတုန်း… အဲဒီလိုတွေးမိတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ လဦးပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေနဲ့ နည်းနည်းကွင်းဆက်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် အလင်းပြပါ့မယ်.. ဆက်သာဖတ်သွားကြည့်လိုက်ပါ။
Concept သောက်ဆန်းကြီးတွေနဲ့ Idol အဖွဲ့တွေကိုဖန်တီးဖို့ဝန်မလေးတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက မြင်ဖူးသမျှ ဆန်းပေ့ဆိုတဲ့ Idol အဖွဲ့တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်တောင် အပုံကြီးပိုဆန်းနေသေးတဲ့ Idol အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ Virtual Currency Girls (Katsoutsuka Shoujo) လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲဒီအဖွဲ့ဟာ နာမည်အတိုင်းပဲ Virtual Currency တွေကို Theme ယူထားပြီးဖန်တီးထားတာပါ။ Virtual Currency Theme ဆိုတော့ ဘာကြီးလား.. စကားနဲ့သရုပ်ဖော်ရတာခက်ခဲလို့ အောက်ကပုံကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။
Courtesy of Kasoutsuka Shoujo
မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကို ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ ဘာမှန်းမသိနိုင်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။ သေချာကြည့်လိုက်ရင် နဖူးအလယ်နားမှာ logo လေးတွေမြင်ရမှာပါ.. အဲဒါတွေကတော့ လက်ရှိစျေးကွက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Cryptocurrency တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီက Cryptocurrency တစ်ခုချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုပြီး BitCoin Cash (BCH), BitCoin (BTC), Ethereum (ETH), Neo (NEO), Mona (MONA), Dardano (ADA), NEM (XEM) နဲ့ Ripple (XRP) တို့ကို ကိုယ်စားပြုထားကြတာပါ။ ဒီအထိကတော့ Virtual Currency ကို theme ယူထားတဲ့ Idol အဖွဲ့ရှိကြောင်းပြောပြတာပါ.. Cryptocurrency တွေ hack တဲ့ကိစ္စနဲ့ သူတို့နဲ့ ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တာလည်းဆိုတာဖက်ကို သွားရအောင်ပါ..
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ.. ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့က Virtual Currency Exchange Service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Coincheck ဟာ ဒေါ်လာသန်း ၅၃၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ NEM coin တွေကို ခိုးယူခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံး Virtual Currency ခိုးယူခံရမှုဖြစ်လာတော့ ဂျပန်အစိုးရကမနေသာတော့ပဲ ကုမ္ပဏီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်ရပါတော့တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်တွေရဲ့ Virtual Currency Girls အဖွဲ့က သူတို့ Theme နဲ့လိုက်ဖက်အောင် သူတို့ရဲ့ event ticket တွေရော merchandise တွေကိုပါ cryptocurrency နဲ့ပဲရောင်းချပါတယ်။ အဲထက်ပိုဆိုးတာက အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လစာကိုပါ cryptocurrency နဲ့ပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ agency က ငွေသားနဲ့ပေးမယ်လို့ပြောပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်က cryptocurrency နဲ့ပဲယူမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတာပါ။ ဒီလောက်ဆို ဘာတွေဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီဆိုတာ အနည်းနဲ့အများခန့်မှန်းလို့ရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. Coincheck Service တစ်ခုလုံးရပ်ထားရတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေခမျာ ticket တွေ merchandise တွေလည်းရောင်းလို့မရ၊ သူတို့ရဲ့လစတွေလည်းထုတ်ယူလို့မရနဲ့ အခက်တွေ့နေရရှာပါတယ်။ သတင်းစာရှင်လင်းပွဲတစ်ခုမှာ သူတို့ပြောပြခဲ့တာအရဆိုရင် အဖွဲ့ဝင် ၅ ယောက်ဟာ Coincheck ကနေ ယန်း ၂ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၈,၄၀၀) ခန့် ရစရာရှိနေပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း Debut လုပ်ပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတာဆိုတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်သွားကြလောက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လေးစားဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပေမယ့် သူတို့ရဲ့မူကိုချိုးဖောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတဲ့။ လောလောဆယ် ဝင်ငွေတွေမရရှိပေမယ့် သူတို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လူတွေ cryptocurrency ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုသိရှိလာအောင်၊ cryptocurrency ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်လာအောင် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖြန့်ချိပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မလားဆိုတာကတော့ အချိန်ကစကားပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ချစ်စဖွယ် Maid ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ cryptocurrency မျက်နှာဖုံးတွေဝတ်ဆင်ထားကြတဲ့ Virtual Currency Girls အဖွဲ့ရဲ့သီချင်းလေးကို နားဆင်ကြည့်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထူးဆန်းမှုလေးတွေကို ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါလို့…
Ref: ANN, CNN, Reuters
PREVIOUS POST Previous post: K Pop Idol နဲ့ မတူပဲ ခွဲထွက်နေတဲ့ Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KARD !!
NEXT POST Next post: SM, JYP နဲ့ Big Hit Entertainment တို့ပူးပေါင်းပြီး Music Service တစ်ခုဖန်တီးမည်